Home Wararka Cali Geedi oo lagu wareejinayo qandaraaska dhismaha Wasaaradda GDH iyo Xildhibaano balantii looga...
Cali Geedi oo lagu wareejinayo qandaraaska dhismaha Wasaaradda GDH iyo Xildhibaano balantii looga baxay? (Xog)
Waxaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay la isku haystay qandaraaska dhismaha ay lahaan doonto Wasaraada Gaadidka Cirka iyo Duulista Hawada. Dhismahaan ayaa waxa lagu qiimeeyay in ay ku baxeeyso lacag dhan $1.6 Milyan oo doolar taas oo ka imanayso deeq Soomaaliya loogu deeqay.
Sida ay xaqiijisay MOL marka dhismaha dhamaado lacagta rasmiga ah ee ku baxayso dhismaha waxaa lagu qiyaasay $645,000 inta ka soo hartaana waxa ay jeebka u galaysaa cidii qandaraaska dhismaha la siiyo.
Hadaba iyada oo la qiimaynayo lacagta laga sameeyanayo dhismaha ayaa waxa tartar is barbar socdd la galiyay dhowr kooxood oo ay kala wataan MW Farmaajo iyo RW Kheyre:
Ra’iisal Wasaare Kheyre ayaa balan qaad u sameeyay dhowr shirkadood oo ay soo sameeysteen xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo uu kula heshiiyay in ka haraan Mooshinka ka dhanka ah isaga. Shirkadaha qaar waxaa sameeyntooda qayb ka ahaa Ra’iisal Wasaare Kheyre oo talooyin badan ku lahaa qaab dhismeedka shirkada been abuurka ah.
Ganacsato isgu jiro kuwa ay isku hayb yihiin Ra’iisal Wasaare Kheyre iyo qaar uu kala dhaxeeyo howlo ganacsi.
Shirkadao uu wato Cali Maxamed Geedi laakiin uu gadaal ka taagan yahay Madaxweyne Farmaajo. Cali Maxamed Geedi ayaa horay waxa loo siiyay in uu dhiso Madaxtooyada isaga oo watay shirkad ay qayb ka lahayd xaaaska Madaxweyenaha Zeynab Abdi Macalin
Iyo Ganacsato watao shirkado laakiin gacan saar la leh wasiirka Gadiidka Cirka iyo Dhulka kuwaas oo uu kula heshiiyay in qaybtiisa laga siiyo lacagta ka imaan doono qandaraaskaas. Waxaa sidoo kale qayb ka ah kooxdaan xog’hayaha joogtada ee Wasaaradda.
Hadaba warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay MOL ayaa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo soo dhex galay howlaha qandaraaska isla markaana uu ku amray Wasiirka in qandaraaska lagu wareejiyo Cali Maxamed Geedi oo shirkad la ah xaaska Madaxweyne Farmaajo Zeynab.
Dhanka kale waxa iyagana da’daal ku jira xildhibaadii mooshinka ka noqday ee loo baalan qaaday in la siinayo qandaraaska oo habeen iyo maalin jooga xafiiska Ra’iisal Wasaare Kheyre.
Waxaan wali la soo afajarin qilaafka ka jira cidii la siin lahaa qandaraaska dhismaha iyada oo la isku hayaso cidii lagu naasnuujin lahaa iyo qaabkii loo qaybsan lahaa hantida laga dhaco shacabka Soomaaliyeed.